Varotra bots for Cryptotrading - Blockchain News
Mey 10, 2018 Admin
Varotra bots for Cryptotrading
Ahoana no bots miasa ho cryptotrading?
Bots misy eo amin'ny endriky ny rindrambaiko, izay, matetika, miasa mivantana amin'ny crypto-fifanakalozana amin'ny alalan'ny fandaharana interface tsara (API). Ny tanjon'ny bots avy hatrany dia ny manao varotra amin'ny fananana: ho an'ity, bots hitarika ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany ny tsena vaovao sy, miorina amin'ny angon-drakitra azo, hanapa-kevitra ny pamaranana varotra. Arakaraka ny voafidy tetika, nanendry masontsivana ary mametraha tanjona, mpivarotra afaka misafidy iray amin'ireo efatra karazana bots:
Trading bots handinika ny vaovao azo avy amin'ny crypto-fifanakalozana, ary hanapa-kevitra momba ny nividy sy nivarotra ny cryptocurrency miorina amin'ny masontsivana voafidy ny mpivarotra. Io karazana bots azo namboarina hiasa amin'ny masontsivana maromaro indray, na azonao ampiasaina predefined paik'ady izay novokarin'ny mpandalina.
Arbitrage bots manara-maso ny fiovana eo amin'ny fakan-teny avy Cryptocurrency amin'ny fifanakalozana isan-karazany ary avy hatrany hanao varotra mba hahazoana tombony amin'ny maha samy hafa ny vidiny.
Custom bots, na mba bots, Ampiasaina mba hanao varotra amin'ny predefined masontsivana izay niditra tanana na voafantina amin'ny fomba mandeha ho azy.
Script BotS misy amin'ny endrika fototra rindrambaiko, miorina izay mety tsy miankina ny mpivarotra ampiendrehina ny asan 'ny Bot. Nampiasain'ny mpivarotra za-draharaha izay mahafantatra ny intricacies ny varotra ao amin'ny Crypto Market.
Loza in Trading bots amin'ny Crypto Market
tsininy rindrambaiko: tsy ny rehetra amin'izao fotoana izao dia misy bots natomboky ny ekipa ny mpandraharaha matihanina sy za-draharaha crypto mpivarotra. Ary, ny Bot, Izay kaody ny fahadisoana natao, Mety tsy ho mahomby, fa manan-danja ihany koa ny mahatonga fatiantoka ara-bola, indrindra miaraka amin'ny iray zara raha voafidy tetika. Ary noho izany, noho ny raharaham-barotra tsy hanenenana mifidy ihany no voaporofo bots azo antoka amin'ny laza sy ny fitaovana isan-karazany.
Instantaneous firodanan'ny ny cryptocurrency: cryptocurrencies tsy ireo dia ho tena mikorontana-pananana, tsy azo antoka manohitra nitsotsotra. Noho izany, tamin'ny volana Jona 2017, amin'ny GDAX fifanakalozana, ho toy ny vokatry ny fifanarahana lehibe, ny vidin-ny rivotra nilatsaka avy $ 319 ny 10 cents ny. Vokatr'izany, mpivarotra izay tsy nametraka fijanonana-fatiantoka fetra, amin'ny resaka segondra, nijaly fatiantoka lehibe. Noho izany, mpivarotra sasany dia matoky fa bots afaka miasa afa-tsy amin'ny toe-javatra miavaka sy za-draharaha kokoa ny mpivarotra dia milaza mialoha araka ny marina ny toe-javatra eny an-tsena.
hosoka: ao amin'ny unregulated tsena, cryptocurrency tranga ny hosoka mitranga matetika, ary miara-miasa amin'ny tsy misy afa-tsy bots dia. Tamin'ny volana Desambra 2017, Bot scam ny Hexabo niasa mavitrika eny an-tsena, fanakanana ny mpampiasa ny vola, fampiatoana ny Output ny crypto vola, ary avy eo tsy miasa intsony, angamba amin'ny alalan'ny fandefasana ny vola rehetra ho an'ny mpandraharaha ny sehatra. koa, araka ny mpivarotra iray, tokony tsy maimaim-poana malaza bots, satria hiaraka aminy ianao dia afaka maka ratsy toetra rindrambaiko, ny tanjon'ny izay dia ny hahazo ny fidirana amin'ny mpanjifany tsy miankina mampiasa ny fanalahidy na ny mpivarotra node ny harena ankibon'ny tany.
Popular bots for Cryptotrading
3faingo dia malaza vola Bot for automated cryptotrading, izay miasa toy izany fifanakalozana araka Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi sy YOBIT. Manolotra lehibe Portfolios fantina maro samihafa izay afaka misafidy ny mpampiasa vola na hampiasa toy ny poto-fitaovana ahafahany manara-maso ny toe-piainana tsena. Izany dia manome ho an'ny fampiasana ny fijanonana niara-fatiantoka didy sy handray-tombony. Tsy manana famandrihana efatra haavon'ny – “Voalohany” for $ 30, “Trading” for $ 50, “Professional” for $ 100, ary koa “Individual” for fifanarahana.
Cryptohopper dia rahona Bot-monina karama izay miasa na dia ny mpivarotra dia ny solosaina, na eny ivelany. Za-draharaha dia afaka tsy miankina mpivarotra ampanjifaina ny asan 'ny Bot, beginners raha afaka mampiasa ny misy “Tsy Mifantoka”. Bot koa ny handinika sy manamarina ny fahombiazan'ny rafi-barotra famantarana nataony tamin'ny lasa (backtest), manana Stop Loss fanaraha-maso mba algorithm, ary afaka varotra mivantana amin'ny fifanakalozana maro. Tsy misy telo karazana famandrihana isam-bolana – for $ 19, $ 49 ary $ 99. Ny fanadihadiana amin'ny antsipirihany kokoa ny sehatra azo jerena ato.
Cryptotrader dia iray amin'ireo malaza indrindra rahona cryptobots for varotra. Manohana maro ny crypto-vola sy ny fifanakalozana. Tsy maintsy ho tanteraka namboarina ny mpampiasa. Offers backtesting sy stratejika tsena fiasan'ny, izay manome fahafahana ireo mpampiasa ny varotra paik'ady. Tsy misy ambaratongam-dimy famandrihana isam-bolana: for 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC sy 0.0214 BTC.
Haasbot dia sehatra ho an'ny varotra mandeha ho azy, natao, voalohany indrindra, fa za-draharaha bitcoin-mpivarotra. Mampiasa paikady homarinana avy amin'ny tahirin-kevitra fanadihadiana ara-teknika. Izany dia karama Bot ary manana ambaratongam-telo fanao isan-taona famandrihana: ny fahazoan-dàlana “mpanao voalohany” for 0.073 BTC, “Simple” for 0.127 BTC sy ny “Extended” Mombamomba ny mpanoratra, izay vola lany 0.208 BTC. Arakaraka ny fahazoan-dàlana novidina, mpampiasa dia afaka ampiendrehina maro mifampitohitohy bots izay ho afaka hanao ny asa maro samy hafa.
Gekko dia maimaim-poana loharano misokatra Bot izay azo alaina any GitHub. Tsy ampy ny mampiasa tsotra, manana antsipirihany dingana-by-dingana toromarika izay ho ilaina ho an'ny kely saina mpivarotra. Manana mety interface tsara, dia afaka backtest paik'ady sy sary an-tsaina ny vokatry ny varotra. Ary, ny rindrankajy Bot mihazakazaka amin'ny rafitra fandidiana indrindra.
Zenbot iray hafa loharano misokatra ho an'ny bitcoin Bot mpivarotra. Ny mpampiasa Bot Afaka maka ny fehezan-dalàna, ary manao ny asany ny fanovana, ary ny algorithm tsy ampy ny rafitra fandidiana lehibe. ary, Tsy toy ny Gekko, Zenbot dia afaka manao avo-matetika varotra sy hampihatra arbitrage fahafahana. Na izany aza, ao amin'ny fiaraha-monina crypto no nanamarika fa ny Bot tsy nisy fanavaozana nandritra ny fotoana ela, ka noho izany tsy misy fahafahana miasa amin'ny fifanakalozana ny vaovao malaza.
Bots for Cryptotrading
Previous Post:Blockchain News 10.05.2018
Next Post:Blockchain News 11.05.2018